Izany no toa ilay fanavaozana mahavariana ny Shibuya Apple Store any Japon | Vaovao IPhone
Ny fanokafana sy fanavaozana ny Apple Store dia mazàna fitakiana dokambarotra tena lehibe ho an'ny tanàna misy azy. Vao haingana, ho fanampin'izay, Tim Cook dia nitsidika ny Apple Store izay hita tao amin'ny Puerta del Sol marika manerana ny afovoan'i Madrid. Na izany aza, tsy misy fivarotana Apple izay tsy miteraka fanantenana lehibe.
Tamin'ity indray mitoraka ity, ny Apple Stiore ao Shibuya any Japana dia nahazo fanamboarana mahavariana. Andao hojerentsika ny fomba nanirian'ny Apple hampifantoka ny sain'ity fivarotana Apple ity miaraka amina endrika vaovao hivoahany.
Fomba Japoney tena, miloko mankalaza izany amin'ny faha-26 dia hisy ny fanokafana ofisialy aorian'ny fanidiana azy ho an'ny fanavaozana ny fanaka anatiny ary indrindra ny façade, izay nitafy loko manga sy volomparasy nifandimby ary mifototra amin'ny singa fotsy, toy ny marika famantarana eo alohany. Ilay penina metaly mainty mahazatra izay mazàna mihantona amin'ny faran'ny Apple Store dia tsy hita, ka ireo mpandalo dia mahazo antoka raha tsy tsikaritr'izy ireo fa teo akaikin'ny tempolin'ilay sakana izy ireo, tsy isalasalana fa tian'i Apple izany.
Na izany aza, ny fifantohana dia ny tohatra fitaratra mahavariana izay ahafahanao miakatra (na midina, miankina amin'ny làlana tianao) mankany amin'ireo efitrano samihafa ao amin'ny Apple StoreFantatrao, raha efa nankany amin'ny iray tamin'izy ireo ianao, fa rehefa samy hafa ny haavony, dia apetrany eo an-tampony ireo kojakoja. Ankoatr'izay, mba hankalazana azy ireo dia nametaka andian-tsary izay hamela anao ao amin'ireto rohy etsy ambany ireto, raha te hanova ny volavolan'ny Springboard anao amin'ny zavatra aziatika kokoa ianao, saingy ny fomba Apple foana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Izany no toa ilay fanavaozana mahavariana ny Shibuya Apple Store any Japon
Ralph rothschild dia hoy izy:
Mahazo fampandrenesana fa tsy te handray aho ary tsy misy fomba tsy handraisana azy ireo.
Mamaly an'i Ralph Rothschild
Raha mahazo fampandrenesana famoahana vaovao amin'ny Internet ianao, dia efa nanaiky azy ireo ianao tamin'ny fotoana sasany, tsy misy fomba hafa. Raha te-hanala azy ireo ianao dia afaka manao izany avy amin'ny Fikirakirana ny browser-nao.
Amin'ity faran'ny herinandro ity dia manova fotoana izy ireo, mitandrema amin'ny Apple Watch